မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း (MSB) - Download the Free Bible App - Download now or read online. - Android - iPhone/iPad
Read Version: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း​သည် ကျမ်း​စာ​၏​မူ​ရင်း​ဘာ​သာ​စ​ကား​များ​ဖြစ်​သော ဟေ​ဗြဲ၊ အာ​ရ​မိတ်​နှင့် ဂ​ရိ​ဘာ​သာ​စ​ကား​တို့​မှ အ​သစ်​ဘာ​သာ​ပြန်​ဆို​ထား​သော​သမ္မာ​ကျမ်း​စာ​ဖြစ်​ပါ​သည်။ ဘာ​သာ​ပြန်​ဆို​ရာ​တွင် မူ​ရင်း​ဘာ​သာ​စ​ကား​၏အ​ဓိပ္ပာယ်​ကို ထိ​ရောက်​မှန်​ကန်​စွာ​ထုတ်​ဖော်​၍ မူ​ရင်း​ရေး​ပုံ​ရေး​နည်း​များ​ကို​လည်း အ​တတ်​နိုင်​ဆုံး​ထိန်း​သိမ်း​ထား​ပါ​သည်။ ဤ​ကျမ်း​စာ​သည် မြန်​မာ​ဘာ​သာ​ဖြင့်​ဖတ်​ရှု​နိုင်​သော​သမ္မာ​ကျမ်း​စာ​များ​အ​နက် တိ​ကျ​မှန်​ကန်​၍ လွယ်​ကူ​ရှင်း​လင်း​စွာ​ဖတ်​ရှု​နိုင်​သော​ ကျမ်း​စာ​ဖြစ်​ပြီး ခေတ်​သုံး​မြန်​မာ​ဘာ​သာ​စ​ကား​၏​စံ​များ​နှင့်​ကိုက်​ညီ​၍ အ​လွှာ​အ​သီး​သီး​မှ​မြန်​မာ​လူ​မျိုး​တို့​နှင့် အံ​ဝင်​ဂွင်​ကျ​ဖြစ်​ပါ​သည်။ မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း​သည် ကျမ်း​ပ​ညာ​ရှင်​များ၊ ဘာ​သာ​ဗေ​ဒ​ပ​ညာ​ရှင်​များ​စ​သည့်​ပုဂ္ဂိုလ်​များ​ဖြင့်​ဖွဲ့​စည်း​ထား​သော Global Bible Initiative အ​ဖွဲ့​၏​လုပ်​ငန်း​တစ်​ရပ်​ဖြစ်​ပါ​သည်။ Global Bible Initiative အ​ဖွဲ့​သည် နောက်​ဆုံး​ပေါ်​နည်း​ပ​ညာ​များ​ကို​အ​သုံး​ပြု​လျက် ခေတ်​မီ​၍​လွယ်​ကူ​ရှင်း​လင်း​စွာ​ဖတ်​ရှု​နိုင်​မည့်​သမ္မာ​ကျမ်း​စာ​ကို အ​ဓိ​က​ဘာ​သာ​စ​ကား​များ​ဖြင့် ဘာ​သာ​ပြန်​ဆို​ထုတ်​ဝေ​ရန် ဆောင်​ရွက်​လျက်​ရှိ​သော​အ​ဖွဲ့​အ​စည်း​ဖြစ်​ပါ​သည်။
The Myanmar Standard Bible is an all-new Myanmar Bible translated from the original biblical languages (Hebrew, Aramaic and Greek). It faithfully captures the meaning and authentically preserves the style of the original languages. As one of the most accurate and readable Myanmar language versions available today, it meets modern Myanmar language standards and fits the need of Myanmar people at different educational levels. The Myanmar Standard Bible, isaproject of the Global Bible Initiative, which is an organization working to produce updated and readable translations in many main languages, organized byateam of prominent Bible scholars and linguistic experts, benefiting from the most up-to-date technology.